​अहिलेसम्म मन पर्ने भेटेकी छैन– अनु शाह, नायिका
Tuesday, 27 Feb, 2018 12:44 PM
एक दशकदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय नायिका अनु शाहले हालसम्म २३ वटा चलचित्र र करिब ४ सय म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन् । थुप्रै विज्ञापनहरुमा समेत काम गरेकी अनुको अन्य नायिकाको जस्तो चर्चा हुने गरेको छैन । उनै अनुसँग रेजिना पाण्डेको जम्काभेट :
आजभोलि चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा तपाईंलाई खासै देखिन्न नि ?
हो, आजभोलि फिल्म र म्युजिक भिडियोमा त्यति काम गरेकी छैन । युनिलिभरको उत्पादनहरुको प्रचार प्रसारमा बढी व्यस्त छु ।
चलचित्रको कामलाई छाडेर किन युनिलिभरको प्रचारप्रसारको कामतिर लाग्नुभएको ?
काम त छोडेको छैन । कामको अफरहरु पनि छन् । विज्ञापन र नयाँ चलचित्रहरु गरिरहेको छु । बीचमा युनिलिभरको प्रचार प्रशारमा व्यस्त भएको मात्र हो ।
चलचित्रमा काम नपाएर त्यत तिर लागेको भन्ने हल्ला छ नि ?
होइन । मलाई कामको खाँचो पनि छैन । मलाई कामको प्रस्ताव नआएका पनि होइन, अब राम्रा किसिमका चलचित्र मात्र गरौं भन्ने मेरो उद्देश्य हो । जबसम्म दर्शकको माया र सिने क्षेत्रमा अग्रजहरुले काम दिनुहुन्छ तबसम्म अनु शाह कहिल्यै खाली बस्नु पर्दैन ।
तपाईले दुई दर्जन जति चलचित्रमा काम गर्नुभयो । तर अधिकांश चल्न सकेनन्, होइन ?
मैले खेलेका सबै चलचित्र राम्रो नै चलेको म मान्छु । मेरो पहिलो चलचित्र युगदेखि युगसम्म पनि दर्शकले रुचाएका थिए । चर्चा र प्रशंसा मेरो राम्रै भएको थियो ।
राम्रो चलचित्र बनाउनको लागि तपाईंको बिचारमा के चाहिन्छ ?
सिनेमाको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुहुन्छ ।
भविष्यको केही नयाँ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ कि ?
हेरौैं । यही क्षेत्रमा लागियो, अब यो ठाउँ छाडेर अन्त जाने भन्ने पनि छैन । यसै क्षेत्रमा केही न केही गर्ने सोच बनाएको छु । अब फिलम निमार्णतर्फ लाग्ने योजना छ ।
कस्तो खालको सिनेमा बनाउने सोच छ ?
समय र दर्शकको चाहनाअनुसारकै सिनेमा बनाउने हो ।
निर्देशनतर्फ त रुचि छैन ?
निर्देशन त गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन । निर्देशक भनेको त्यो नाम हो, जसको सानो गल्तीले पनि नाम पल्टन सक्छ म त्यो गल्ती गर्न चाहन्नँ ।
घरजमको बारेमा पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
घरजम गर्ने उमेर नै भएको छैन, के सोच्ने ? आमाबुबाले बिचार गरिहाल्नु हुन्छ नि ।
मनपर्ने कोही छन् कि ?
छैन, अहिलेसम्म कसैलाई भेटेकी छैन ।
उसो भए बुबाआमाले छानेकै केटोसँग बिवाह गर्नुहुन्छ ?
हो, आमा बुबाले छोरीलाई मन पर्ने खोज्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।